pyuland: September 2009
Posted by ပျူတို့မြေ at 10:23 PM 1 comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 6:27 PM0comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 3:05 PM0comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 1:11 AM2comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 9:28 AM 1 comments Links to this post
ဝေဖန်ရေးနှင့် အတွေးအခေါ်သစ်ကို ကြိုဆိုသင့်သည် (၁)
“ပေါင်းစည်းရင်း ကွဲလွဲနိုင်ကြပါစေ၊ ကွဲလွဲရင်း ပေါင်းစည်းနိုင်ကြပါစေ”
“ရန်သူမရှိ မိတ်ဆွေသာရှိ၊ မုန်းသူမရှိ ချစ်သူသာရှိ”
“အတွေးခေါ်ဟူသမျှ ပြိုင်ကြပါစေ၊ ပန်းဟူသမျှ လှိုင်ကြပါစေ”
……. ….. …
“သင်သေသွားသော် သင်ဖွားသောမြေ၊ သင်တို့ပြည်သည် အခြေတိုးမြင့်၊
“ပညာမတတ်တဲ့သူ တိုင်းပြည်ချစ်ရင် ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်”
“ဆင်ဖြူဖြစ်ဖြစ် ဆင်မည်းဖြစ်ဖြစ် ဆင်ဟာ တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ကို လူဟာ
“သင်္ကန်းဝတ်လိုက်တဲ့ မုဒိမ်းသမား သူခိုးဂျပိုးကို ၀ိုင်းရှိခိုးတဲ့ဓလေ့ မြန်မာပြည်မှာ
“ပညာတတ်တိုင်း အတွေးအခေါ် ပြောင်းလဲသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး”
(အောင်ကျော်ခင်၊ ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် ဆောင်းပါးရှင်။)
လူသားတို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ ဖြတ်သန်းမှုများသည် ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်
အယူအဆတို့ဖြင့် လည်းကောင်း၊ သင်ကြားတတ်မြောက်မှု ဆိုင်ရာ အတတ်ပညာ
တို့ဖြင့် လည်းကောင်း၊ မှတ်သားဖတ်ရူရာ စာပေအသိပညာများဖြင့် လည်းကောင်း
အရာရာကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှား ဖြတ်သန်း နေကြရ၏။
အတွေးအခေါ် အယူအဆ ပြောင်းလဲရေးအတွက် ပညာရှင်အသီးသီးသည် အတိတ်၊
ပစ္စုပ္ပန် ကာလများနှင့် နောင် အနာဂတ် ကာလများတွင် အမျိုးမျိုးသော မှတ်တမ်း
မှတ်ရာများကို လူ့အဖွဲ့အစည်းထံသို့ ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ အနေအထား အမျိုးမျိုးမှ နည်း
လမ်းမျိုးစုံ အသုံးပြု၍ တင်ပြနေကြမည် ဖြစ်သည်။
ဆရာဦးဆန်းလွင်၏ “သစ္စာဥာဏ်ပွင့် ဒဿန” စာအုပ်မှ ….
“ကြိုးစင်ပေါ်သို့ တက်သွားသော ကြိုးပေးခံရမည့် ရာဇ၀တ်အကျဉ်းသားနှင့်
နွားသတ်ရုံအတွင်းသို့ အပို့ခံရသော နွားတစ်ကောင်၏ ဘ၀”
ကွားခြားမှု မည်သို့ ရှိသည် ….
ဆရာနန္ဒသိန်းဇံ၏ “မှန်သောစကားကို ဆိုခြင်း” စာအုပ်မှ ….
“အရှင်သခင် ပုဏ္ဍေးမ ကြောင့် မီးပုံအတွင်း သေဆုံးခဲ့သော ကျေးညီငယ်”
အသေဆိုးဖြင့် အဘယ်ကြောင့် သေဆုံးခဲ့သည် …..
စာဖတ်သူများသာ သိကြပါသည်။ စာအုပ် ၀ယ်နိုင်သူနှင့် ဌားရမ်း၍ ဖတ်ရူနိုင်သူ
များသာ သိနိုင်ကြပါသည်။ အဲဒီထက်တော့ မပိုပါ။
မြန်မာပြည်တွင် ယခုအခါ စာကြည်တိုက်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားများကို နေရာအတော်
များများ၌ မကြာခဏ ပြုလုပ်ကြ ပါသည်။
အဲဒီ စာကြည်တိုက်တွေမှာ စစ်အစိုးရ စာပေစီစစ်ရေးမှ ခွင့်မပြုသော စာအုပ်များ၊
ပြန်လည်ထုတ်ဝေခွင့် မရသော ရှားပါးစာအုပ်များသည် အရေအတွက် အားဖြင့်
ဘယ်လောက်များများ ရှိပါသနည်း။ စာကြည့်တိုက်ရှိ စာအုပ် အရေအတွက်သည်
အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပြည်ပြည်စုံစုံတောင် ရှိပါ့မလား။
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များ၊ မော်ဒယ်ဂဲလ်များ၏ ရုပ်ပုံလွှာများ မပါရှိသော မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်
များ၊ ဂျာနယ်များသည် အရောင်းရဆုံး စာအုပ်စာရင်းတွင် မပါရှိနိုင်။
အများစုပြောနေကြ စကားလုံးများမှာ …
“ကုန်ဈေးနှုန်းက ကြီးသည်၊ စာအုပ်ဈေးက မြင့်သည်၊ တနေ့လုပ်မှ တနေ့
စားရသည်၊ ညဖက်တွင် ရုပ်မြင်သံကြားမှ လာသော ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းများ
ကြည့်သည်၊ စနေ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက်များတွင် မြန်မာဗွီဒီယို ဇာတ်လမ်းများ
ကြည့်ဖြစ်သည်၊ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဘယ်သူဘယ်ဝါ လူမှုရေးပြဿနာ ဖြစ်တဲ့
သတင်းတော့ တခါတလေ ဖတ်သည်၊ ဘောလုံးပွဲ အနိုင်အရှုံး ဇယားတော့
သေသေချာချာ ဖတ်သည်၊ ဗေဒင်ဟောစာတမ်းထဲက ယတြာချေဖို့ကိစ္စတော့
Posted by ပျူတို့မြေ at 6:32 PM0comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 2:17 AM7comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 8:48 PM0comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 2:14 PM0comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 10:11 PM0comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 8:26 PM 1 comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 2:15 PM0comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 3:33 PM 1 comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 11:36 PM 1 comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 4:41 PM0comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 8:29 PM0comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 2:21 PM0comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 8:09 PM 1 comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 1:05 PM0comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 10:52 PM4comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 12:23 AM3comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 1:51 AM3comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 8:06 PM0comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 5:15 PM4comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 6:24 PM6comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 6:36 PM2comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 6:54 PM 1 comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 9:18 PM3comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 9:39 PM 10 comments Links to this post
Posted by ပျူတို့မြေ at 8:11 PM 11 comments Links to this post